Coral Vita oo fadhigeedu yahay Bahamas ayaa ku guulaystay Abaalmarinta Earthshot ee Amiir William
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Coral Vita oo fadhigeedu yahay Bahamas ayaa ku guulaystay Abaalmarinta Earthshot ee Amiir William
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wasaaradda Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada ee Bahamas waxay u hambalyeyneysaa shirkadda fadhigeedu yahay Grand-Bahama Coral Vita ka dib markii ay ku guulaysatay Abaalmarinta Earthshot ee Amiir William oo hal milyan oo Pound ah oo lagu qabtay Qasriga Alexandra, ee London Axaddii la soo dhaafay. Abaalmarinta Earthshot ee £ 1 milyan waxaa bixisay Royal Foundation shantii guuleyste sanad walba xalalkooda hal abuurka leh ee caqabadaha deegaanka. Abaalmarinnada waxaa lagu bixiyaa shan qaybood: “Ilaali oo Soo celi Dabeecadda,” “Soo noolee Baddeena,” “Nadiifi Hawadayada,” “Dhiso Adduun Qashin-la’aan ah” iyo “Hagaaji Cimiladayada.” Waxaa ka mid ah shantii qof ee ugu horreeyay ee ku guuleysta Abaalmarinta, kooxda Coral Vita waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta £ 1 milyan ee qeybta “Soo noolee Baddeenna”.
Hindise cilmiyeed ku salaysan jasiiradda Grand Bahama ayaa heshay aqoonsi caalami ah oo ku aaddan saamaynta ay ku leedahay in lagu daaweeyo saamaynta kulaylka caalamiga ah ee badaha adduunka.
Coral Vita wuxuu awoodaa inuu koro koral ilaa 50 jeer si ka dhaqso badan inta uu ku korayo dabeecadda, iyadoo kor u qaadeysa adkeysiga ka -hortagga aashitada iyo diirimaadka badda.
Xaruntu waxay labanlaabmaysaa sidii xaruntii waxbarashada badda waxayna caan ku noqotay soo jiidashada dalxiiska.
Markii uu helay warka Abaalmarinta Earthshot ee la siiyay Coral Vita, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada Joy Jibrilu ayaa yiri, “Dal ahaan, waxay na siineysaa sharaf aad u weyn in hindise cilmiyeed ku saleysan jasiiradda Grand Bahama uu leeyahay helay aqoonsi caalami ah oo ku aaddan saamaynta ay ku leedahay in lagu daweeyo saamaynta kulaylka adduunku ku leeyahay badaha adduunka. ”
Sannadkii 2018, Sam Teicher iyo Gator Halpern, aasaasayaashii Coral Vita, waxay Grand Bahama ka dhiseen beer coral ah si loola dagaallamo isbeddelka cimilada ee Bahamas. Xaruntu waxay labanlaabmaysaa sidii xaruntii waxbarashada badda waxayna caan ku noqotay soo jiidashada dalxiiska. Hal sano kadib markii la bilaabay xaruntan, Hurricane Dorian ayaa burburisay jasiiradda Grand Bahama, taas oo xoojisay go'aanka shirkadda ee ah in la badbaadiyo qashin -qubka. Iyada oo la adeegsanayo habab horumar leh, Coral Vita wuxuu awoodaa inuu koro koral ilaa 50 jeer ka dhaqso badan inta uu ku korayo dabeecadda, iyadoo kor u qaadeysa adkeysiga ka dhanka ah asiidinta iyo kuleylka kuleylka. Hababkan horumarineed ee sayniska ayaa ka dhigay Coral Vita inuu noqdo murashaxa ugu habboon Abaalmarinta Dhulka.
The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge Earthshot Prize waxaa la sameeyay 2021. Hadafka abaalmarintu waa in la dhiirrigeliyo isbeddelka oo gacan laga geysto hagaajinta meeraha tobanka sano ee soo socda.
Sannad kasta, tobanka sano ee soo socota, shan abaalmarin oo midkiiba hal milyan oo ginni ah ayaa la siin doonaa dadka xiiseeya deegaanka, iyadoo la rajaynayo inay 50 xal u helaan dhibaatooyinka deegaanka ee dunida ugu weyn marka la gaaro 2030. In ka badan 750 magacaabid oo ka kala yimid dhammaan gobollada adduunka ayaa la baaray abaalmarinta caalamiga ah ee sharafta leh. Waxaa jiray saddex qof oo isugu soo haray dhammaadka shantii qayboodba. Dhammaan shan iyo tobankii qof ee u soo baxay kama dambaysta waxaa taageeri doona The Earthshot Prize Global Alliance, oo ah shabakad samafal, NGO -yo, iyo meherado ganacsi oo gaar loo leeyahay oo adduunka oo dhan kuwaas oo gacan ka geysan doona kor u qaadista xalalkooda.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Earthshot riix halkan.